တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
luorlu ရှိရထားမတော်တဆမှုတွင်သေဆုံးသွားသူများ၏မိသားစုများကိုရှင်းပြခြင်း၊ 25 အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် luorlu ရထားမတော်တဆဖြစ်မှုတွင်မိသားစုများသည် TCDD နှင့်စီးပွားဖြစ်လုပ်ဆောင်မှုများတွင်ကျွမ်းကျင်သောအရည်အချင်းမရှိဘဲအမှု၌ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ [ပို ... ]
လျှော့လက်မှတ်တွေ De TCDD ရဲများက၏အခွင့်အရေးအသိအမှတ်ပြု
တူရကီသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်မီးရထား, စစ်တပ်နှင့်ယခုနှစ်နေ့တိုင်း, ဆရာရဲလျှော့စျေးအသိအမှတ်ပြု၏ညာဘက်အသိအမှတျမထားဘူး။ 2015 အတွက်ဖြန့်ချိတိကျတဲ့ applications များနှင့်အတူစစ်သားများနှင့်ရဲအရာရှိများတစ်ဦးလျှော့စျေးရမှယခုနှစ်နေ့တိုင်း [ပို ... ]
အဆိုပါ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုဝန်ထမ်း၏မြှင့်တင်ရေးအပေါ်စည်းမျဉ်းများတွင်အပြောင်းအလဲများ
ရေတွက်ခြင်းနှင့်ရက်စွဲပါအင်္ဂါနေ့အရာရှိတဦး၏ဇွန်လ 18 2019 30805 အရေအတွက်ကိုအတွက်စည်းမျဉ်းများဖို့ပြင်ဆင်ချက်ကိုရည်မှတ်ပြည်နယ်မီးရထားပို့ဆောင်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းရုံးဝန်ထမ်းမြှင့်တင်ရေးနှင့်ခေါင်းစဉ်ပြောင်းလဲမှုစည်းမျဉ်းများတူရကီအထွေထွေညွှန်ကြားမှုသမ္မတနိုင်ငံ [ပို ... ]
အဆိုပါ TCDD ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးမှမြင်ကွင်းများမြင်းစီးသူရဲထောက်ပြ
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Afyonkarahisar Bölge Müdürü Adem Sivri, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı’yı ziyaret etti. TCDD Afyon 7. Bölge Müdürü Adem Sivri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın 162 yıllık öyküsünün [ပို ... ]
Intelligent ပို့ဆောင်ရေးစနစ်များအပေါ် TCDD, နိုင်ငံတကာထိပ်သီးအစည်းအဝေး
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın da üyesi bulunduğu Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği’nin(AUSDER) “I. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi” Açılış Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M.Cahit Turhan’ın teşrifleriyle 06 Mart 2019 Çarşamba [ပို ... ]
နှစ်ပေါင်းများစွာဘတ်ဂျက်ကိုအနက်ရောင်အပေါက်တစ်ခုအဖြစ်သို့ရောက်သွားသည်။ 2017'yi2ပေါင်ဘီလီယံကိုပိတ်ထားရသည်။ အဆိုပါပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်အစ္စမေးလ် Sahin သတင်း, တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံအတွက်မကြာသေးမီမတော်တဆမှု၏အစီအစဉ်အရ [ပို ... ]
တူရကီအတွက်ရထားလမ်း၏အဘယ်သူမျှမပြသည့် 80 ရာခိုင်နှုန်း
အင်ဂျင်နီယာဌာနအင်ဂျင်နီယာဌာနသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာန။ Karaşahin Mustafa, ထိုရထားလမ်းတူရကီအတွက် 80 ရာခိုင်နှုန်းကိုခုနှစ်တွင်အချက်ပြကပြောသည်။ ဒီဇင်ဘာလက 13 - Ankara ရှိ 06 - အမြန်ရထားလမ်းကို 30 တန်းများ [ပို ... ]
အဆိုပါ TCDD အမည်ပြောင်းလဲခြင်းစွပ်စွဲချက်များ၏ဖော်ပြချက်
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü isminin değişeceği yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün adının “Demiryolu Düzenleme [ပို ... ]
TCDD KPSS 2017 /2တာဝန်ရလဒ်များနောက်ဆုံးရေးသားချိန်
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) ၏ရလဒ်များကို၏ကြေညာချက်ကိုသက်ဆိုင်ရာအဖြစ်ကြေငြာချက်ထုတ်ဝေပြီးမှ KPSS 2017 /2ရွေးချယ်မှု။ သို့သော်စာရင်း updated ခံခဲ့ရပြန်စာရင်းကိုအသစ်အမည်များကိုထည့်သွင်းကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ [ပို ... ]
structures များရလဒ်များစာရင်းနောက်ဆုံးရေးသားချိန်သောသူတို့သည်နှစ်သက် TCDD KPSS 2017 /2တာဝန်